Omenala na Omenala nke Masai | Akụkọ Njem
Otu n'ime ndị a kacha mara amara n'Africa bụ Ndị Maasai ma ọ bụ ndị Masai, nke taa na-ekesa n'etiti Kenya na Tanzania. Eleghị anya ị hụla akwụkwọ akụkọ na ọwa pụrụ iche ma ọ bụ nụ maka ha na akụkọ na fim.
Ndị Masai bịara n’ala ndị ha bi ugbu a site na mgbago ugwu Kenya wee malite ịkwaga na narị afọ nke XNUMX, na-ewere ala. Ọ bụ obodo, ọ bụrụ na ị gaa njem n'Africa ma nwee mmasị n'ọhịa, ị ga-amata ihe kpatara ya bi ezigbo ebe ụfọdụ ogige ntụrụndụ mba kacha mma na ama ama. Ka anyị mụta ihe taa site na ọdịbendị na ọdịnala ha.
1 Ndị Maasai
2 Omenala Masai
Akụkọ ihe mere eme nke obodo a na-ekwu nke ahụ, na nwere mmalite ya na ndagwurugwu Naịl dị ala, n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Kenya, nke ahụ wee malite ịkwaga na narị afọ nke XNUMX ruo mgbe anyị weghaara ókèala ugbu a, ọnọdụ nke ruru na narị afọ nke XNUMX
Ahapụbeghị ndị Maasai na esemokwu ndị colonial na kọntinent ahụ. Iwu mmezi, dịka ọmụmaatụ, nke Alaeze Ukwu Britain, wepụrụ ala, na mgbakwunye ọrịa ndị Europe nke metụtara ndị bi na ha. Ọ bụkwa eziokwu na n'ime narị afọ nke iri abụọ kwa enweghị ebe obibi mgbe emere ogige ntụrụndụ mba na anụ ọhịana Kenya na Tanzania.
Ndị Maasai bụ ndị na-azụ ehi, ndi ozuzu aturu, na mkpa nke onye Maasai site na otutu anu ulo o nwere na umuaka. Y’oburu na inwere ma ha abuo, mgbe ahu a g’enye gi ogbenye. Ha anọgidewo na-eguzogide mgbalị ndị gọọmentị nke mba abụọ ahụ na-eme iji na-ebi ndụ ka mma. Na tupu nke ahụ, n'oge ndị ọchịchị, ha na-eguzogide ịgba ohu mgbe niile.
N'ikpeazụ, ndị Masai nwere subgroups onye nke ọ bụla nwekwara omenala ọ na-asụ, olumba ya, otú o si eyi uwe na ihe ndị ọzọ. N'ime obodo a na-akpọ subgroups ndị a "mba" ma ha nwere ihe dịka 22.
Obodo Maasai bụ nna ọ bụkwa ụmụ nwoke na-eme mkpebi, mgbe ụfọdụkwa na-akwado ma ọ bụ na-adụ ndị okenye ọdụ. A na-ebufe omenala ndị mmadụ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ọnụ na mmejọ mmadụ na-anabata ntaramahụhụ anụ ahụ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ na ngwa nri, ya bụ, na ehi, ma ọ bụrụ na arịrịọ mgbaghara ma ọ bụ ime udo adịghị amịpụta.
Banyere okpukpe ndị Maasai na-ekwu ha na-efe otu Chineke, ya bu, ha kwenyere n’otu chi ha na-akpo Enkai ma ọ bụ Engai. Ọ bụ ihe nke ọdịdị abụọ yabụ dịka e nwere Engai Na-nyokie, Chineke na-abọ ọbọ, enwere Engai Narok, Chukwu Oji, onye bụ ezigbo mmadụ n’akụkọ ahụ. E nwekwara totem: Oodo Mongi ma ọ bụ Ehi Uhie, na Orok Kiteng, ma ọ bụ Ehi Ojii; nakwa anụ ọhịa nke bụ ọdụm.
Ikekwe ị chere na ịbụ oke ihe ọdụm enweghị ike gbuo, n'ụdị ehi dị nsọ na India, mana ọ bụghị otu ahụ. Ndị Masai na-egbu ọdụm, ọ bụ ezie na ha na-eme ya n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ihe karịrị otu trophy ọ bụ emume nnabata.
N'aka nke ọzọ, nwee ndị Masai shaman, ụfọdụ ndị ogbugbo dị n'etiti ụwa Chineke na ụwa mmadụ? Ee, a maara ya dị ka laibon na kpomkwem ọ na-eme amụma, na-agwọ ọrịa na omume ịgba afa, n'ozuzu na ajụjụ metụtara ihu igwe ma ọ bụ esemokwu dị n'etiti ebo. Ọrụ a bụ akụkọ ihe mere eme, mana dịka oge gbanwere taa, laibon na-arụkwa ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Oge a emewo ka ọgwụ Western dị nso na ndị Maasai, na-enyere aka melite obere ọmụmụ na akụkọ ndụ ụmụaka. N'ime ụwa na-enweghị ọgwụ nje ma ọ bụ ihe ọmụma banyere ịdị ọcha, ndị Maasai naanị ihe ha na-eme bụ ịmata nwata ahụ dịka onye otu onye nwụrụ n’abalị ọnwa atọ. Gịnị banyere ọnwụ? You nwere ọdịnala ma ọ bụ akụkọ ọdịnala banyere ọnwụ ma ọ bụ ndụ mgbe ọ nwụsịrị?
Ee e, enweghị ememe ma ọ bụ nkwenye pụrụ iche nke na-enyocha ndụ mgbe a nwụsịrị. N'ihe na-ele ndụ anya karịa mgbe mmadụ nwụrụ, ọ na-anwụ wee hapụ ozu ya nye ndị na-atụgharị ihe, ọ bụ ezie na ikekwe a na-eli nnukwu onye isi. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara anụmanụ anaghị eri ya, a kwenyere na ọ ga-abụrịrị na ihe ojoo emeela ma nwee ike bute nsogbu ezin’ụlọ, ya mere iji jide n’aka na ndị na-ebugharị ya na-ahapụ ọkpụkpụ ha mgbe ụfọdụ iji ihe oriri kpuchie ahụ.
Na-ekwu maka nri, anụ ụlọ bụ isi ntinye haHa na-ewepụta anụ, mmiri ara ehi na ọbụna ọbara site na ehi, nke ha na-a sometimesụ mgbe ụfọdụ. Ọ bụ ezie na akụkọ ihe mere eme nke a bụ eziokwu, ruo n'ókè nke na anụ ụlọ belatara taa ha na-adaberekwa na osikapa, poteto, kabeeji na sorghum. Taa, ịbụ naanị pastọ dị mgbagwoju anya na obodo ahụ dum dị n'etiti ọdịnala na nkwadebe nke ụmụ ha maka ụwa nke oge a.
Maasai ọha na-enwe ọganihu site na ịmụ nwa rue agadi site na ịhapụ usoro dị iche iche na amalite ememe nke na-eme mgbe ahụ gbanwere. Yabụ, mgbe ụmụaka bụ ụmụaka na-egwuri egwu ruo mgbe na 12 ha na-amalite dị ka ndị agha, ebe ụmụ agbọghọ na-ejisike elekọta ọrụ ụlọ.
Childrenmụaka, ịbụ ndị dike, bìe úgwù na-enweghi anestasia. Ito eto na-afụ ụfụ na nke ahụ bụ echiche ahụ. Ọ masịrị gị? Ee, were ya na amụ na-agwọ ọrịa mgbe ọnwa atọ ma ọ bụ anọ gachara na oge urination bụ ọnọdụ.
Childrenmụaka, afọ ole na ole gachara, gafere usoro ọzọ nke na-eme ka ha nweta, ka anyị kwuo, ọkwa nke agadi dike. N'ihi ya, ndị bu ha ụzọ gara n'ihu na-eme mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-anọ ebe nke ndị okenye jibu, rue mgbe ha onwe ha bụ ọgbọ ahụ. Ndị na-eto eto na-eto eto nwere ogologo ntutu isi, ndị agadi nwere obere ntutu. Gịnị banyere ụmụ agbọghọ ahụ? Ọfọn, lee Omenala ibi ugwu umu agbogho dị ka nzọụkwụ tupu ọnọdụ ya nke ịbụ nwanyị lụrụ di.
Ndị Maasai na-ewere ibi ugwu ụmụ nwanyị dị ka ihe dị mkpa na Menmụ nwoke Maasai anaghị alụ ụmụ nwanyị ndị na-emebeghị ụdị emume a akpọ emuratare. Ma ọ bụrụ na ha anabata, ụgwọ isi nwanyị dị ọnụ ala karịa. Nwanyị a na-ebighị úgwù ka a na-ewere dịka ntozubeghị oke. Gaghị enwe klọtọ ịlụ nwanyị ma tụọ ime, ma ozugbo ị tụrụ ime, ị gaghị enwe mmekọahụ.
O doro anya na nke a na omenala n'oge a na-akatọ ya nke ukwuu ma enwere mmegide siri ike megide ya ruo n'ókè nke na emezuola ya na, mgbe ụfọdụ, ma ọ bụghị ọtụtụ, emeghị ihe ọzọ na usoro ikpe nke ụlọ ikpe bụ ihe atụ. A ghaghi ikwu ya na taa na Kenya na Tanzania ka amachibidoro ibi nwanyi ugwu.
Nke a gbasara obodo Maasai na njirimara ya, ihe ekwesịrị ịgụ tupu ị gaa Africa iji mata ha nke ọma. Emechaa, ihe ị ga-ahụ nwere ihe ọ bụla ị ga-eme egwu ya na egwu ya na nka. Enwere otutu egwu, egwu na ezi ofufe nke mmeghari ahu site na ọla ntị na ntị, nke ụdị na nha niile, na mmịpụta nke canine na nwata (n'ihi na ha chere na afọ ọsịsa, ahụ ọkụ ma ọ bụ agbọ agbọ na-ebute site na ọbara ọgbụgba nke ezé ndị a). .
Ha na-eyikwa ihe olu, ọla aka, na uwe ndị mara mma a na-ere dị ka ihe ncheta nye ndị njem nleta. N'ikpeazụ, ụfọdụ eziokwu: taa ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya na-eme atụmatụ na 900.000 ndị mmadụ Gịnị ka ha na-ekwu? Ghar, mana ọzọkwa Ha na-asụ bekee na Swahili.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Kenya » Omenala na ọdịnala ndị Masai